Ny tale ny fanatanterahana | Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar
Ny talen’ny fanatanterahana no miantoka ny lafiny fampiharana ireo famatsiambola sy ireo hetsika. Izy no miantsoroka ny endrika fikirakirana ao amin’ny « fondation ». Ny tale mpanatanteraka no mametraka ny fitsipika anaty, manome alalalana na fikarohana na fanohanana, miandraikitra ny fandraisana mpiasa, manapakevitra amin’ny fanokafana kaontim-bola, manapakevitra amin’ny taratasy fifanarahana, manaramaso ny hetsika fanomezana fanampiana, mitazona sy mamaritra ireo kaonty.
M. Alain Liva RAHARIJAONA
Tato amin'ny FAPBM nanomboka tamin'ny 2005 i Tahina ary manana mari-pahaizana avy tao amin'ny INSCAE izy. Niasa tao amin'ny WWF Madagascar izy mialohan'ny nankanesany tao am FAPBM.
Nanomboka tamin'ny 2012 i Hajarivo no tato amin'ny FAPBM. Nahazo mari-pahaizana avy tao amin'ny ISPM sy ny INPF izy ary niasa tamin'ny "menuiserie" an'ny tenany ary tamin'ny fanaovana trano alohan'ny nankanesany tato amin'ny FAPBM.
Serge Henri RATSIRAHONANA
Nanomboka niasa tato amin'ny FAPBM tamin'ny 2015 i Serge. Biologiste ary nianatra momba ny "anthropologie économique au SUNY Stony Brook, NY - USA". Niasa tao amin'ny UNESCO (Centre du Patrimoine Mondial), tao amin'ny CARE International Madagascar sy tao amin'ny banky iraisam-pirenena izy talohan'ny niasany tato amin'ny FAPBM
Nahazo maripahaizana tao amin'ny INSCAE ary avy tao amin'ny ENAM i Onintsoa. Niasa tao amin'ny FASP - Private Sector Support Fund, AGETIPA ary ny Programme Environnemental 3 izy alohan'ny nahatongavany tato amin'ny FFAPBM tamin'ny novambra 2016
Manana mari-pahaizana amin'ny "Finances et Comptabilité", nanomboka niasa tato amin'ny Fondation i Evah raha avy niasa tamin'ny sehatry ny "audit" tamin'ny "cabinet" sy tao amin'ny "groupe Sipromad"
Manana mari-pahaizana amin'ny "Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication" avy amin'ny "Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo", i Aina dia nanomboka niasa tato amin'ny FAPBM tamin'ny 2016 raha avy niasa tany amin'ny Orange Madagascar sy Marie Stopes Madagascar izy.
Nahazo ny mari-pahaizana "comptabilité sy finances" avy teny amin'ny INSCAE i Mamy ary niasa tany amin'ny tetikasa Managed Resources Protected Areas sy ny Comité Internationale de la Croix Rouge alohan'ny nidirany tato amin'ny FAPBM
"Ingénieur forestier", i Ranto dia niasa tamin'ny fiarovanana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ka manampahaizana manokana izy amin'ny "gouvernance forestière", ny "NRR management" ary ny "FSC Forest Certification".